How kuwana zvitoro zvakaisvonaka kuti kushandisa magazini e-mail kubva nepachinko yokumusoro
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ How kuwana zvitoro zvakaisvonaka kuti kushandisa magazini e-mail kubva nepachinko yokumusoro
Munhu wose kubva nepachinko parlors, yebhizimisi mashoko zviitiko uye zuva, ndinofunga kuti vamwe vanhu vakaenda tsamba. Nekuti zuva nezuva kusvika chinhu na, ndanzwa kuti vanhu vazhinji vari ukasachenjerera chaizvo kutarisa. Zvisinei, kana kurwadziwa vari kugamuchira tsamba, aida mashoko haina kuchengeta muruoko ari kurasikirwa.
Naizvozvo, isu ataure Utilisation nzira makurukuriro tsamba yakanaka. Basa Mail nepachinko parlors, masvika akatasva kuti vakaisa chiitiko ruzivo uye Xintai mashoko zuva, kana kuti simba. E-mail, kunyange pasina kuenda nepachinko yokumusoro, huchashandiswa akawana mashoko ari muchitoro.
nounyanzvi Utilisation nzira dzakadaro e-mail, verenga chido kubva tsamba, ipapo kuitwa zvitoro kusarudza zvakanaka zvichienzaniswa nezvimwe kuzvitoro. Chokutanga, sei uri chiitiko ruzivo, kana chiitiko kunomanikidza uri, unogona kufungidzira maererano chiitiko womuenzaniso kuti yakatogadzirwa.
Somuenzaniso, nguva dzose kana uri hapana muenzaniso akawandisa vachimhanya vari chiitiko yokutevedzera, anowedzera mukana wokuti Gase zvainanga kuvhiyiwa. Kana zviitiko akatambanudza nomwoyo wose, muenzaniso uye zviratidzo womuenzaniso zviri kusimbisa, kana vakauya kuna chiitiko womuenzaniso, pane kuda kuedza nyaya yacho payout.
chakaita ezvinhu nezvezviitiko zvakadaro, uye edza kuita kuti kuverenga kubva mail, sokunge hazvina zvakakodzera kuenda kupambadza chiitiko, hapana kuva pfachura inivhesitimendi. Mukuwedzera, mazuva mashoma asati chiitiko guru, pane imwe zuva pashure akabata zviitiko, pane kuti tsamba huru kugutsikana anotumwa.
akadaro e-mail, nekuti ndicho pakupora maitiro maererano chiitiko, riri kuti hakuna mhando chinangwa zvakakwana kupfeka zuva dzemabhizimisi e-mail. Mazuva mashoma mberi chiitiko chiziviso yave zvawanikwa vakawanda, inoti kuti ngozi zviri nani kwete kuenda mberi ranwa.
Zvino, ndinofunga kuti dzimwe nguva pane kuti tsamba runopiwa kunze senguva nguva.
mugari tsamba kwakadaro, mukuru-akatarwa pasina risati chiziviso Kana akaita mharidzo pechikuva, pamwe kana akazivisa nderamafuta chipikiri tafura, sezvo kazhinji chinangwa ruzivo, zviri nani kuva nechokwadi kuti aongorore, ndinofunga kuti zvakanaka.
Zvisinei, kubva pfungwa nemaonero ezvinhu aripo kumutsa kubheja pfungwa, saka haagoni mumwe vanofa Kuronga chiziviso kuti chiziviso, ndizvo sei kure chinogona kutarisirwa, zviri muchitoro. The E-mail nhengo, kune vazhinji Kana uri kudana rakaisvonaka mashoko ambotaurwa pane dzimwe vatengi.
Xintai of rotari uye rotari nguva musiyano rakazaruka, iwe kana mundiudze pamberi kuti nguva unpublished. Somugumisiro, kunyange nyaya kuti warohwa dzimwe muzvitoro, ndiko shanduro kana kurova kumira zvakanaka kwohumwe ezvinhu. From
siyana nepachinko parlors, vamwe vaya vakagamuchira e-mail, vamwe vanhu zvitoro siyana kuti panguva. Ucharwirwa munguva chaiyo, yakadai se e-mail yezvakanga ripoti, ndinofunga kuti nounyanzvi zvinganzi kuti kurwisa vanhu vanokwanisa kushandisa.
akadaro, utilizing zvakanaka mashoko akawana preferentially, sezvo akaenzanisa akasiyana-siyana nepachinko parlors, ndinofunga kuti kuedza kuenda pasi nemuzvitoro kuti chinangwa kubvira nguva nenguva.